ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအပေါ် လိမ်လည်မှုနှင့် သတင်းမှားများကိုသတိထားရန် အမေရိကန်အစိုးရအေ ဂျင်စီများ အသိပေး - People Media Myanmar
Home ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအပေါ် လိမ်လည်မှုနှင့် သတင်းမှားများကိုသတိထားရန် အမေရိကန်အစိုးရအေ ဂျင်စီများ အသိပေး
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအပေါ် လိမ်လည်မှုနှင့် သတင်းမှားများကိုသတိထားရန် အမေရိကန်အစိုးရအေ ဂျင်စီများ အသိပေး
ပြီးခဲ့သည့်တပတ်အတွင်း ဖိုင်ဇာ/ဘိုင်ယွန်းတက်ခ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကိုအတည်ပြုပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတခွင်တွင်ဖြန့်ချိနေချိန် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်စောင့်ဆိုင်းနေသူများအနေဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသောလိမ်လည်မှုများနှင့် ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ချိမှုအကြောင်းသတင်းမှားများကို သတိထားရန် အာဏာပိုင်များကသတိပေးသည်။
အထိအခိုက်လွယ်သည့်ပုဂ္ဂလိကအချက်အလက်များရယူပြီး ကာကွယ်ဆေးရမည်ဟု လိမ်လည်သူများ ကပြောဆိုခြင်းနှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို ကုသရန် သို့ ကာကွယ်ရန် ကတိပေးသောကုသမှုများကို ကုမ္ပဏီများကလိမ်လည်ရောင်းချခြင်းတိုအပေါ်လည်း အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက သတိပေးသည်။
လူအများ၏ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုအသုံးချပြီး နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် လူတယောက်ချင်းစီ၏အချက်အလက်များနှင့်ငွေများရယူရန် လိမ်လည်သူများရှိနေကြောင်း ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို(FBI)ထံတိုင်ကြားများရှိနေကြောင်း ဗျူရိုက စီအန်အန်သတင်း ဌာနကိုပြောသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကိုအသုံးချပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာသည့်လူလိမ်များကိုဖော်ထုတ်ရန် နိုးနိုးကြားကြားရှိနေကြောင်းလည်း ဗျူရိုကပြောသည်။ ကူးစက်ခံရသူများကိုကုသရန် သိပ္ပံနည်းကျ အတည်မပြုနိုင်သေးသည့်ထုတ်ကုန်များရောင်းချနေသည့်ကုမ္ပဏီ ၇ ခုထံ သတိပေးစာများပို့ထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်(FTC)ကထုတ်ပြန်သည်။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါစတင်ပြီးနောက် စာတိုများနှင့်အလိုအလျောက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများဖြင့် စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ၊ လိမ်လည်ကုသမှုများနှင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်အကူအညီများကမ်းလှမ်းသည့် တိုင်ကြားချက် ၂၀၀၀၀ ကျော်ကို FTC ရရှိခဲ့သည်။
Ref : First came news ofavaccine. Now come the scams.
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျဆေးအပျေါ လိမျလညျမှုနှငျ့ သတငျးမှားမြားကိုသတိထားရနျ အမရေိကနျအစိုးရအေ ဂငျြစီမြား အသိပေး
ပွီးခဲ့သညျ့တပတျအတှငျး ဖိုငျဇာ/ဘိုငျယှနျးတကျချကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျဆေးကိုအတညျပွုပွီးနောကျ အမရေိကနျပွညျထောငျစုတခှငျတှငျဖွနျ့ခြိနခြေိနျ ကာကှယျဆေးထိုးရနျစောငျ့ဆိုငျးနသေူမြားအနဖွေငျ့ အန်တရာယျရှိသောလိမျလညျမှုမြားနှငျ့ ကာကှယျဆေးဖွနျ့ခြိမှုအကွောငျးသတငျးမှားမြားကို သတိထားရနျ အာဏာပိုငျမြားကသတိပေးသညျ။
အထိအခိုကျလှယျသညျ့ပုဂ်ဂလိကအခကျြအလကျမြားရယူပွီး ကာကှယျဆေးရမညျဟု လိမျလညျသူမြား ကပွောဆိုခွငျးနှငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုကို ကုသရနျ သို့ ကာကှယျရနျ ကတိပေးသောကုသမှုမြားကို ကုမ်ပဏီမြားကလိမျလညျရောငျးခခြွငျးတိုအပျေါလညျး အစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြားက သတိပေးသညျ။
လူအမြား၏ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျဆေးအပျေါစိတျဝငျစားမှုကိုအသုံးခပြွီး နညျးလမျးမြိုးစုံဖွငျ့ လူတယောကျခငျြးစီ၏အခကျြအလကျမြားနှငျ့ငှမြေားရယူရနျ လိမျလညျသူမြားရှိနကွေောငျး ပွညျထောငျစုစုံစမျးစဈဆေးရေးဗြူရို(FBI)ထံတိုငျကွားမြားရှိနကွေောငျး ဗြူရိုက စီအနျအနျသတငျး ဌာနကိုပွောသညျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှုကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကိုအသုံးခပြွီး ကိုယျကြိုးရှာသညျ့လူလိမျမြားကိုဖျောထုတျရနျ နိုးနိုးကွားကွားရှိနကွေောငျးလညျး ဗြူရိုကပွောသညျ။ ကူးစကျခံရသူမြားကိုကုသရနျ သိပ်ပံနညျးကြ အတညျမပွုနိုငျသေးသညျ့ထုတျကုနျမြားရောငျးခနြသေညျ့ကုမ်ပဏီ ၇ ခုထံ သတိပေးစာမြားပို့ထားကွောငျး ပွညျထောငျစုကုနျသှယျရေးကျောမရှငျ(FTC)ကထုတျပွနျသညျ။
ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါစတငျပွီးနောကျ စာတိုမြားနှငျ့အလိုအလြောကျဖုနျးချေါဆိုမှုမြားဖွငျ့ စမျးသပျပစ်စညျးမြား၊ လိမျလညျကုသမှုမြားနှငျ့ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါနှငျ့ဆကျစပျအကူအညီမြားကမျးလှမျးသညျ့ တိုငျကွားခကျြ ၂၀၀၀၀ ကြျောကို FTC ရရှိခဲ့သညျ။
« ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူများအား ပြန်လည်လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များ ဆောင်ရွက်နေ
ပြည်သူများအနေဖြင့် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်းများ တပ်ဆင်မှုကို လိုက်နာမှုမရှိပါက စည်းကမ်းအချို့ ထပ်မံချ မှတ်မည်ဟု ဒေါက်တာမြင့်ထွေးပြော »